Air India လေကြောင်းလိုင်းများကိုရပ်နားလိုက်ပြီ - မက်ဒရစ်၊ မီလန်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဗီယင်နာ၊ စတော့ဟုမ်း | လေကြောင်းလိုင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » လေကြောင်းလိုင်း » Air India လေကြောင်းလိုင်းများကိုခေတ္တရပ်နားသည်။ Madrid၊ Milan၊ Copenhagen, Vienna, Stockholm
Air India လေကြောင်းလိုင်းများကိုခေတ္တရပ်နားသည်။ Madrid၊ Milan၊ Copenhagen, Vienna, Stockholm
အဲယားအိန္ဒိယကထိုခရီးစဉ်များအတွက်ခရီးသည် ၀ ယ်လိုအားကျဆင်းခြင်းကြောင့်အနည်းဆုံးဥရောပခရီးစဉ် ၅ ခုသို့ပျံသန်းမှုကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အမျိုးသားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီသည်ဤလမ်းကြောင်းများကြောင့်ငွေရေးကြေးရေးအရအသုံးမပြုနိုင်တော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် COVID-19 coronavirus ကပ်ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများ.
ခုတ်ဖြတ်နေရာတွင်မက်ဒရစ်၊ မီလန်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဗီယင်နာနှင့်စတော့ဟုမ်းမြို့များသည်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။
Air India ၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှထုတ်ပြန်သောပြည်တွင်းကြေညာချက်တွင်“ COVID အခြေအနေကိုကြည့်။ အောက်ပါဘူတာများကိုပိတ်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်လာစေရန်အရည်အချင်းရှိသောအခွင့်အာဏာကခွင့်ပြုထားသည်။ ”
"လက်ရှိ IBOs (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘွတ်ကင်ရုံးများ) ကိုအိန္ဒိယကိုပြန်ခေါ်ရမယ်။ တရားဝင်ပိတ်သိမ်းမှုပြီးတဲ့အခါဒီဘူတာကို GSA (အထွေထွေအရောင်းကိုယ်စားလှယ်) ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မယ်" ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
IATA (International Air Transport Association) ကဇူလိုင်လတွင်ခန့်မှန်းထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသည်ပို့ဆောင်မှု (ဝင်ငွေ၏ကီလိုမီတာသို့မဟုတ် RPKs) သည် Covid-19 မတိုင်မီအဆင့်သို့ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊
ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသည်အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမည်ဟု IATA မှပြောကြားခဲ့သည်။ Aprilပြီလတွင်ကမ္ဘာ့ခရီးသည်အရေအတွက်သည် ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းနိုင်ကြောင်း IATA မှခန့်မှန်းချက်အရပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ နှစ်။
ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသောခရီးသည်များသည် Air India ကိုမက်ဒရစ်၊ မီလန်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဗီယင်နာနှင့်စတော့ဟုမ်းသို့သွားသင့်သည် ပြန်အမ်းငွေနှင့်ပတ်သက်။ အမျိုးသားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ.
Air India သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနေရာ ၁၀၃ ခုသို့ပျံသန်းမှုကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၁ ရှိမြို့ ၄၅ မြို့နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်မြို့ကြီး ၅၈ သို့ပျံသန်းသည်။ Boeing 103 Dreamliner၊ ဘိုးအင်း 45-31LRm ဘိုးအင်း 58-737, ဘိုးအင်း 777-200ER, Airbus A747-400 စီအီးအို၊ Airbus A777-300 စီအီးအို၊ အဲယားဘတ် A320-214 NEO၊ အဲယားဘတ်စ် A320၊ အဲယားဘတ် A214၊ အဲယားဘတ် A320၊ 251-321 နှင့် ATR 319-319 ။